ဘီလာရုဇ်နိုင်ငံ၌ သောင်တင်နေသည့် အီရတ်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအား ဘေးလွတ်ရာပြောင်းရွှေ့ရန် အီရတ်နိုင်ငံက အရေးပေါ်လေယာဉ် စေလွှတ်မည် - Xinhua News Agency
အီရတ်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအား ဂရိနိုင်ငံ Athens အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်၌ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဩဂုတ် ၆ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဘဂ္ဂဒက် ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ဘီလာရုဇ်နိုင်ငံ၌ သောင်တင်နေပြီး ၎င်းတို့ ဆန္ဒအလျောက် အီရတ်နိုင်ငံသို့ ပြန်လာလိုကြသည့် အီရတ် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအား ဘေးလွတ်ရာသို့ ပြောင်းရွှေ့ပေးနိုင်ရန်အတွက် အရေးပေါ်လေယာဉ်များ စေလွှတ်သွားရန် အီရတ်နိုင်ငံတာဝန်ရှိသူများက နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ဘီလာရုဇ်-ပိုလန် နယ်စပ်များတွင် သောင်တင်နေသည့် အီရတ်နိုင်ငံသားများ၏ အခြေအနေကို အီရတ်အစိုးရက အနီးကပ် စောင့်ကြည့်နေကြောင်း နှင့် အီရတ်နိုင်ငံသို့ ဆန္ဒအလျောက် ပြန်လာလိုသူများအား ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ရန် ဘီလာရုဇ်နိုင်ငံသို့ ၄၈ နာရီအတွင်း အရေးပေါ်လေယာဉ် စေလွှတ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှု နှင့် နေရပ်စွန့်ခွာမှုဆိုင်ရာ အီရတ်ဒုတိယဝန်ကြီး Karim al-Nouri က အီရတ် သတင်းအေဂျင်စီသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
အီရတ်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအား လူမှောင်ခိုဂိုဏ်းများ၏ ရန်မှ ကာကွယ်ရန် ဘီလာရုဇ်နိုင်ငံသို့ လေကြောင်းတိုက်ရိုက်ပျံသန်းမှုများကို ဆိုင်းငံလိုက်ကြောင်း အီရတ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင် ကြေညာခဲ့သည်။
အီရတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Ahmed al-Sahaf က ရုရှား နှင့် ပိုလန်နိုင်ငံများရှိ အီရတ်သံရုံးများသည် အီရတ်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ ဆန္ဒအလျောက် ပြန်လာရေးအတွက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိကြောင်း ဆိုသည်။
နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်မှာပင် တူရကီ လေကြောင်းဦးစီးဌာနက အီရတ် ၊ ဆီရီးယား နှင့် ယီမင်နိုင်ငံသားများအား တူရကီနိုင်ငံမှ ဘီလာရုဇ်နိုင်ငံသို့ လေကြောင်းခရီးစဉ်ဖြင့် သွားရောက်ခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
ဒုက္ခသည်ထောင်ပေါင်းများစွာသည် ပိုလန်နိုင်ငံထဲ ဝင်ရောက်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းမှုတစ်ရပ်အနေဖြင့် ပိုလန်နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည့် ဘီလာရုဇ်နိုင်ငံနယ်စပ်တွင် စုရုံးရောက်ရှိနေကြောင်း ၊ ပိုလန်အားဖြတ်ကျော်ပြီးနောက်တွင် ဂျာမနီနိုင်ငံထဲဝင်ရောက်ကာ ထိုမှတဆင့် အီးယူအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများထံတွင် ခိုလှုံခွင့်ရရန် လုပ်ဆောင်နေကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Iraq to send emergency flight to evacuate stranded Iraqi migrants in Belarus
BAGHDAD, Nov. 13 (Xinhua) — The Iraqi authorities on Saturday decided to send emergency flights to evacuate stranded Iraqi migrants who want to return voluntarily from Belarus to Iraq.
“The Iraqi government is closely following the situation of Iraqis stranded on the Belarus-Poland borders, and within 48 hours, Iraq will send an emergency flight to Belarus to bring back those who want to return voluntarily to Iraq,” Karim al-Nouri, Iraqi deputy minister of migration and displaced, told the Iraqi News Agency.
On Friday, Iraq’s Ministry of Foreign Affairs announced the suspension of direct flights to Belarus to protect Iraqi migrants from human trafficking gangs.
Ahmed al-Sahaf, spokesman of Iraq’s foreign ministry, said that Iraqi embassies in Russia and Poland are coordinating efforts for the voluntary return of the Iraqi migrants.
Also on Friday, the Turkish Civil Aviation Authority announced that it would not allow citizens of Iraq, Syria, and Yemen to fly from Turkey to Belarus.
Thousands of refugees are gathering on the Belarusian side of the border in an attempt to enter Poland and then Germany to seek asylum in the EU countries. Enditem
Photo – Iraqi migrants wearing face masks walk to board an airplane bound for Iraq at the Athens International Airport in Athens, Greece, on Aug. 6, 2020. A total of 134 Iraqis migrants departed from Athens’ airport to Iraq on Thursday, which marked the first-ever voluntary repatriation program foralarge group of migrants in Greece and in Europe, Greek authorities said. (Xinhua/Marios Lolos)